Qaybtii 4aad: Saaxiibtinimadii Shalay Saakay Halkey Maraysaa -Tukesomalism.com | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Maxaad Ka Taqanaa Shimbirka Tukaha |Tukesomalism.com
Irshaad Maxamed — September 23, 2016
Sheekadii waxay inoo maray say ninkii cabdu laahi oo arigii soo helay gabadhiina uu adaygii sii yay intaakadib waa kii loo sheey gay in saxibkii maxamad uu magaala dii joogo oo uu dadka safarka ah iyo reer miyiga xir xidho oo uu meesha ku dhibo.
Hadaba Maxamad reerkoodii buu la soo dagay wuxuuna usoo guuray xagii iyo magaaladi Cabdullahi xaas kiisii hada uur bay leeda hay waana sababta uu magaalada ugu soo dhawaaday. Waa uu iska,faraxsana cabdullahi maadaamuu nolol wacan iska ga jiro,
Waayo xaaskii sii uur bay uleedahay xoolu huna waa ufiican yihiin waana xili doogaada magaa lada dushee duu iska dagan yahay.
Cabdullahi wuxuu soo aaday magaalada si uu uga soo qaato wax kastoo reerku ubaah naa waxaa la socda wiil see digii ah awrna way wataan. Iyagoo magaa ladii jooga ayaa waxaa kasoo horbaxay saxibkii waa Maxamad oo qori wata dirays jeex jeexana xiran oo aad moodo qaadirada iyo dhafar ka kamuuqda ruux uu xanuun adagi hayo_sina waaba uqufacayaa. Isaga oo sigaar afka ku hayuu yiri waryaa kumaa tahay miyaada cabdullahi gaan aqaanay ahay.
Wuxuu yiri Cabdullahi war waa isagii ye go’ana ahayn iiwaran salaan ayuu is yiri isagoo dhoola caday naya oo isle saaxiibkaa maxaa sidaan ugalay?
Laakiin salaantii ka muusan qaadin oo wuxuu yiri war hana salaamin noocan oo kale ma’ salaanee cabdullahi ayaa-si ‘isku halayn leh inta gacanta uqabtay gacan ta qabtoo yiri:-
War isalaan mawaada iga ranayn inaan ahay saaxiibkaa oo aan wax soo wada bara nay. Wuxuu yiri war wasaq baa tahaye hana taaban e’ dhinac nooga is tag. Inta qaadan waa ku noqo tay buu is yiri war saxibmaxaa dhacay maxaa dha cay?
Wuxuu yiri waan ku oga hay inaad taa geerto kuwaan qoriga uwato oo cadaw gay ga’ ah. Cabdullahi wuxuu yiri war ani dan taydaa icuslaysoo warkaaba uma kan sha hayee maxaa jira walaal. Inata ku qoslay buu yiri soco waad xiran tahay.
Waa isyar adkee yay cabdulaahi oo yiri war naga leexo waad anshi xuntahee woxoogaa waa la is yar qab saday meeshii cabdulaahi sedigii oo meesha joogay baa is yiri bal nimanka dhex dhexaadi lkn indha ha ayaa dhirbaaxo lagaga dhuftay oo uusan fila nayn wiil kaasi cabdullahi-na uu laag laagay. Waa yaabeen wiilashii iyaga oo taca jibsan.
Ayuu koox saaxiiba dii ah u yeedhay Maxamad wuxuuna yiri war nimankan illa kexeeya woxoogaa dooda bay isdhe heen. lkn waxaa lagu bilaabay budh iyo ul feedh iyo laag qoriga shub kiisana waa lala dhacay!.
Waxba looma reeban suuqa dhex diisa ayaa la mar siiyay ku wii yoo dhiig iyo dhidid ba ka socdo waxaana la gee yay xero ciidan Awr ay wateen geed magaalada dhex diisa ah bay ku xidhan tahay.
Tags: Saaxiibtinimadii Shalay Saakay Halkey Maraysaa -Tukesomalism.com
Next post Maxaa Lagu Ogaani Karaa In Ganacsigaada Horumar Sameeyay? -Tukesomalism.com
Previous post Yaa Baneeyay in Dumarkeena u Ciyaaraan Rag Aanan Ahayn Gayaankooda? -Tukesomalism.com
About the Author Irshaad Maxamed
Waa qoraa ka tirsan Tuke Somalism. Wuxuu wax ka qoraa hidaha iyo dhaqanka, hal abuurka, hadalka san iyo waliba wuxuu wax ka qoraa waayo aragnimada nolosha. Qoraaga wuxuu cilmi gaar ah u leeyahay hidaha iyo dhaqanka, waliba hal abuurka ku salaysan dhaqamada Soomaaliyeed. Qoraaga wuxuu soo maray dugsiga hoose iyo dhexe. Qoraaga waa qoraa aad u jecel dadka iyo dalka Soomalaiyeed.